April 2022 - Siddhartha Post
कोरियन भाषा परीक्षा स्थगित कोरिया रोजगारीका लागि लिइने कोरियन भाषा परीक्षा स्थगित भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस शाखाले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै यही वैशाख २६ देखि हुने भनिएको परीक्षा स्थगित भएको जनाएको छ । चुनावका कारण परीक्षा
सिओल अहिले स्मार्टफोन हाम्रो दैनिक जीवनको अत्यावश्यक वस्तु बनिसकेको छ । योविना हाम्रा कैयन् कामहरू अधुरा हुन्छन् । वर्तमान विश्वमा ठूलो परिमाणमा मोबाइल फोनको उपयोग शैक्षिक, व्यवसायिक, घरेलु आदि क्षेत्रमा भैरहेको छ । वास्तवमा स्मार्टफोनले संसारलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरिदिएको
सिओल राजदूत चोङ सुक गृहमन्त्रीलाई भेट्न मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालय पुगेका थिए । गृहमन्त्री र राजदूतबीच नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच आपसी सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने विषयमा कुराकानी भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । भेटमा गृहमन्त्री खाँणले नेपालको भौतिक पूर्वाधार
किन घट्यो कोरिया आकर्षण ? कोरिया जान आवेदन दिने अहिलेसम्मकै कम,
सिओल किन घट्यो कोरिया आकर्षण ? कोरिया जान आवेदन दिने अहिलेसम्मकै कम, काठमाडौँ, चैत २२ गते । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान लिइने कोरिया भाषा परीक्षाका लागि ४२ हजार ८११ जनाको आवेदन परेको छ । आवेदन दिनेमध्ये उत्पादनतर्फ